घर संयुक्त राज्य फुटबॉल स्टोरीहरू अंग्रेजी फुटबल खेलाडीहरू रीस नेल्सन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल प्रतिभा प्रस्तुत गर्दछ जसले सबै भन्दा राम्रो नाम "Reiss“। हाम्रो रीस नेल्सन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू तपाईंको बाल्यकालको समयदेखि आजको दिनसम्म तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता प्रस्तुत गर्दछ।
लाइफ एण्ड राइज अफ रिस नेल्सन। स्काईस्पोर्ट्स लाई क्रेडिट र शस्त्रागार एफसी
विश्लेषणमा उसको प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा र क्यारियर निर्माण, प्रारम्भिक क्यारियर जीवन, प्रसिद्धि भन्दा पहिलेको जीवन कहानी, प्रख्यात कथा, सम्बन्ध, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक तथ्यहरू र जीवनशैली आदि शामिल छ।
हो, सबैलाई थाहा छ कि ऊ आर्सेनल एकेडेमीबाट आउने उत्साहजनक युवा मध्ये एक हो। यद्यपि, केहि थोरैले रेस नेल्सनको जीवनी विचार गर्दछ जुन धेरै रोचक छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
Reiss नेल्सन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
सुरूवात गर्दै, उनका पूरा नामहरू रेस ल्यूक नेल्सन हुन्। रेस नेल्सनको जन्म डिसेम्बर 10 डिसेम्बरको 1999th दिनमा उसको आमाबुबाको लागि भएको थियो - जिम्बाब्वेका बुबा र इ English्ल्यान्डको एलिफन्ट र क्यासलको सेन्ट्रल लन्डन क्षेत्रमा एक अंग्रेजी आमा।
रेस नेल्सन धनी परिवार पृष्ठभूमिबाट हुर्केका थिएनन्। साथै, उहाँ बच्चाको त्यस्तो प्रकारको थिएन जसका अभिभावकहरूले उनलाई फुटबलको बाहेक नयाँ खेलौनाहरूको स afford्कलन गर्न सक्षम थिए।
रेस नेल्सन बुबाआमा र एलेस्बरी एस्टेटमा ठूला भाइको साथ हुर्केका थिए। तल चित्रित इस्टेट लन्डनको क्षितिज हावी रहेको उफ्रिने वित्तीय जिल्लाहरुबाट एक विश्व टाढा (पूर्ण भिन्न) छ।
यो आइल्सबरी एस्टेट हो जहाँ रेस नेल्सन हुर्किए। स्काईस्पोर्ट्सलाई क्रेडिट
Reiss नेल्सन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
गिरोह र चाकू अपराधको समस्याबाट बच्न, रीस अभिभावकहरूले आफ्ना छोरालाई वाटरलूको नजिक लन्डन नौटिकल स्कूलमा पठाउने निर्णय गरे। प्रारम्भमा, त्यहाँ नेलसन सही दिशामा जाँदै थिए भन्ने कुरामा कुनै श .्का थिएन। उहाँ एक बुद्धिमान केटा हुनुहुन्थ्यो जसले दुबै शिक्षाविद्सँग मल्ट-टास्क गर्न सक्नुहुन्थ्यो र स्कूलको समय पछि फुटबल खेल्न सक्नुहुन्थ्यो।
जहाँसम्म स्कूल गतिविधिहरूको बारेमा चिन्तित छ, रिस आफ्नो सर्वश्रेष्ठ साथीसँग फुटबल खेल्ने बिना पूर्ण थिएनन्। त्यो सबै भन्दा राम्रो मित्र अरु कुनै व्यक्ति थिएन Jadon Sancho- अँ साञ्ची, तपाईंले त्यो सुन्नुभयो !. Sancho जसका अभिभावक केनिंग्टन पार्कको नजिक गिनीज ट्रस्ट भवनहरूमा बस्छन् उनीहरूको बाल्यकालका दिनदेखि नै रिस सबैभन्दा राम्रा साथी थिए।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… यो क concrete्क्रीट फुटबल अदालतमा रीस नेल्सन र उनको घनिष्ठ मित्र थियो Sancho केटाको रूपमा आफ्नो कौशल सम्मान। यो विकासले उनीहरूलाई लन्डन साउथवर्क बच्चाहरूको प्रतिस्पर्धामा आमन्त्रित भएको देख्यो।
रिस नेल्सन र जाडोन सान्को दुबै बाल्यकालको सर्वश्रेष्ठ मित्र थिए। स्काईस्पोर्ट्समा क्रेडिट
स्काईस्पोर्ट्सका अनुसार। दक्षिण लन्डनमा एक चिसो शरद eveningतु साँझ, दुवै केटाहरू (Sancho र रीस नेल्सन) प्रतियोगितामा खेलाडी प्रशंसकहरूको छक्क परे। होम्स-लुइस, एक फुटबल कोच र संरक्षक एक पटक आफूले देखेको कुराको बारेमा स्वीकार गरे;
"जब म पिचमा पुगेँ, मैले यो केटाले एक्सएनयूएमएक्स-यार्ड पिंग गरेको देखेपछि क्रस-फिल्ड अर्को केटा (जाडोन सान्चो) लाई पास गरे जुन पछि उसलाई सिधा फिर्ता दिए। प्रतिक्रियामा मैले चाँडै मेरा दुई प्रशिक्षकहरू, सेड्रिक [कोबोंगो] र अहमत [अकदज] लाई समातें र भनें, 'के तपाईंले त्यो टेलिपाथिक समझ देख्नुभयो? त्यो पागल थियो !!"
रिस नेल्सन र जाडोन सान्को दुबै टोलीले आफ्नो टीमलाई प्रतिस्पर्धा जित्ने सहयोग पुर्‍याए जुन होम्स-लुइस खुशी थियो।
लिसन साउथवार्क किड्स प्रतियोगितामा रीस र सान्चो। स्काईस्पोर्ट्सलाई क्रेडिट
Reiss नेल्सन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
स्थानीय फुटबलको साथ सफल भएकोले रीस नेल्सनले उनको क्षेत्रको स्थानीय युवा एकेडेमी मूनशटमा कल गरे। त्यहाँ छँदा, उनी टोटेनहमले कराए। रीस एक महिनाको लागि टोटेनहैममा थियो आर्सेनलको एक अपूरणीय कल आउनु भन्दा पहिले। उसको सबैभन्दा मिल्ने साथी सान्कोलाई पनि वाटफोर्डको फोन आयो।
दुबै रीस र Sancho फुटबलका लागि उनीहरूलाई वर्ष 2007 मा देखिएको थियो, परीक्षण पार गर्दै र क्रमशः आर्सेनल र वाटफोर्डको एकेडेमी सेटअपमा सामेल भयो। एकेडेमीमा उनको जीवन शुरू गर्न रीसको लागि सजिलो थिएन। त्यतिखेर, ऊ बिहान चाँडै उठ्थ्यो र आफ्नो ठूलो भाइको छेउमा क्याटफोर्डको लागि ट्रेन लिन। उनले त्यो हप्तामा तीन पटक गरे।
कुनै ठाउँको लामो दूरी वा समयको सदुपयोगले रीस र सान्को बीचको मित्रतालाई कम गर्न सक्दैन। यो केवल ट्रेनमा 38 मिनेट र 52 मिनेट कार द्वारा दुबै केटाहरूलाई एक अर्कालाई हेर्नको लागि लिए। 14 को उमेरमा, मार्च 2015 वरपर, Jadon Sancho म्यानचेस्टर शहर सारियो। रेस नेल्सनले आर्सेनलसँगको रूपमा प्रगति गर्न छोडे धेरै चाँडो क्रममा माथि सारियो।
Reiss नेल्सन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सडकको प्रसिद्धि कथा
एकेडेमी स्तरको माध्यम बाट दौड पछि, Reiss द्वारा आफ्नो पहिलो व्यावसायिक ठेका बाट सम्मानित गरियो आर्सेन वेंजर उनको 17th जन्मदिन मा। गेमि time समय प्राप्त गर्न बोलीमा, रीसले क्यारियरको बारेमा महत्वपूर्ण निर्णय गरे। Jadon Sancho यसभन्दा पहिले जो जर्मनीको बोरसिया डार्टमन्डको लागि प्रस्थान गरेका थिए उनले आफ्नो सबैभन्दा मिल्ने साथी रिसलाई उनी जर्मन बुंडेसलिगामा सामेल हुन सल्लाह दिए।
रेस नेल्सनले आफ्नो पहिलो साथीको पाइला पछ्याउने निर्णय गरे onण loanणमा जाँदा 1899 होफेनहिम, जर्मन क्लबको पहिलो डिभिजनमा एक जर्मन क्लबसँग। जस्तै बोरसिया डार्टमन्डको लागि Jadon Sancho, होफेनहाइमले आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गर्न रेस नेल्सनलाई प्लेटफर्म पनि दिए।
रेस नेल्सन एक पटक6खेलहरूमा7गोलको साथ यूरोपमा शीर्ष स्कोरि English अंग्रेजीका रूपमा मनाइन्थ्यो, औसतमा प्रत्येक 54 मिनेटमा। तल देखाइएको रूपमा, होईन Raheem Sterling न त हैरी केन त्यो हराउन सक्छ।
रीस नेल्सन रोड फेम कथा। क्रेडिट मानक
Reiss नेल्सन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - फेम स्टोरीमा उठाउनुहोस्
होल्फेनहाइममा नेल्सनको प्रभावले उनलाई इ England्ल्यान्डको यूएक्सएनयूएमएक्समा पदोन्नति दियो। यो पनि प्रेरित गरियो Unai Emery जवानको लागि प्रारम्भिक रिकल राख्नको लागि। ती गुणहरू उहाँमा थियो- आत्म-विश्वास, काम दर र दृढ संकल्प - जो होफेनहाइममा प्रस्ट देखिन्थ्यो अब उनले आर्सेनलसँग राम्रो सेवा गरेका छन्।
रीस नेल्सन फेम टु फेम कथा। स्काईस्पोर्ट्सलाई क्रेडिट
रेस नेल्सन जो अर्सेनल पहिलो टीमको प्रतिनिधित्व गर्न 844th प्लेयर बने निस्सन्देह फ्यानहरूमा उहाँ प्रमाणित हुनुभयो कि उहाँ क्लबको अंग्रेजी पीढीको अर्को सुन्दर प्रतिज्ञा हुनुहुन्छ। बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो.
Reiss नेल्सन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सम्बन्ध जीवन
उनको प्रख्यात उदार संग, यो सम्भव छ कि केही आर्सेनल प्रशंसकहरु यो प्रश्न सोधेर आफ्नो सम्बन्ध स्थिति मा चिन्तित गरेको हुनुपर्छ; 'रेस नेल्सनको प्रेमिका को हो?'। हो, त्यहाँ कुनै तथ्यलाई इन्कार गर्ने छैन जुन उसको सुन्दर देखिन्छ र उसको खेलको शैलीले उहाँलाई फमले फ्यानहरूलाई आकर्षक बनाउँदैन।
रिसे नेल्सनको प्रेमिका को हो आईजी लाई क्रेडिट
लेख्ने समयमा, Reiss नेल्सन अझै एकल छ र आफ्नो क्यारियर मा देखिन्छ ध्यान केन्द्रित। उसको पिचको हालको जीवनशैलीबाट हेर्दा, यो Reiss जस्तो देखिन्छ मिसाउन तयार छ। It सम्भव छ कि ऊ सँग प्रेमिका हुन सक्छ तर उनीसँग सार्वजनिक सम्बन्ध बनाउँन इन्कार गर्दछ, कम्तिमा अहिलेको लागि।
Reiss नेल्सन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - व्यक्तिगत जीवन
रेस नेल्सनको व्यक्तिगत जीवनलाई चिन्नुले तपाईंलाई उसको व्यक्तिको राम्रो तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। सुरूवात गर्दै, उहाँ एक शान्त केटा हुनुहुन्छ जो आधुनिक दिनको फुटबलको प्रख्यात नम्रता प्रदर्शन गर्न मन पराउनुहुन्छ।
रिस नेल्सन व्यक्तिगत जीवन चिन्न। आईजी लाई क्रेडिट
रीस नेल्सन एक त्यस्तो व्यक्ति हो जसले आफ्ना विचारहरूलाई ठोस कार्यहरूमा रूपान्तरण गर्न सक्षम हुन्छ र आफ्नो लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न मानव रूपमा सम्भव केहि पनि गर्ने छ।
Reiss नेल्सन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - पारिवारिक जीवन
रेस नेल्सन, ई England्ग्ल्याण्डमा जन्मेकी भए पनि उनको जिम्बावेको जराको कदर गर्दछ। के देखिन्छ यो देखि, आफ्नो बुबा, आमा र ठूलो भाइ सबैले सार्वजनिक मान्यता खोज्न नचाहनेको सचेत छनौट गरेका छन्।
रेस नेल्सनका बुबा: उसको जिम्बावेली बुवाको बारेमा थोरै मात्र चिनिन्छ, उसको नाम पनि हैन। यद्यपि आर्सेनल वेबसाइटका अनुसार रेसले एक पटक आफ्नो बुबाले उसलाई जम्मा गरेकोमा केही क्रेडिट दिएका छन्।
रेस नेल्सनकी आमा: उसको बाल्यकालका दिनहरूमा विचार गर्दै, रीसको एउटा उत्तम सम्झना त्यो हो जुन उसको आमालाई चिन्ता गर्दछ। यो क्षण हो कि उनी वास्तवमै उनलाई किन्नको लागि कडा मेहनत गर्छिन् थेरी हेनरीको जर्सी जुन उनी स्कूल, पार्टीहरू र पिचमा खेल्न हरेक दिन लगाउँथे। तल आमा र छोरा दुबैको फोटो हो जुन पसीसनेट अug्गालो छ।
रेस नेल्सनले उनको आमालाई अ h्गालो हाल्छ। आईजी लाई क्रेडिट
रेस नेल्सनका भाई बहिनीहरू: अनुसार आर्सेनल वेबसाइट, रेस नेल्सनको जेठो दाइ आफ्नो कलिलो भाईको सपना प्राप्त गर्न मद्दतको लागि आफ्नो सामाजिक प्रत्यक्ष त्यागेर श्रेय दिईन्छ। उनको जेठो दाइ जो अझै अज्ञात छन् (नाम- अज्ञात) उनले आज रीसलाई भेट्न यति धेरै त्याग गरे।
जब Reiss शुक्रवार शुक्रबार पार्टीहरुमा जान्छ, उसको जेठो भाईले सप्ताहन्तको चाँडो सुरु हुनुभन्दा पहिले उनी पर्याप्त आराम गरिरहेको छु भनेर निश्चित गर्थे। उसको जेठो भाईले पनि उनलाई एकेडेमी लेक्चर, ढिलो र चाँडो किक-अफका लागि ट्रेनमा पुग्न लागाउँथ्यो।
Reiss नेल्सन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - LifeStyle
रेस नेल्सन एक रमाईलो-मायालु मान्छे हो जसले बनाउने आनन्द लिन्छ, आफ्नो पैसा खर्च गर्दछ र सम्पूर्ण जीवन बिताउँछ। कहिलेकाँही उनी समुद्री छालहरूमा सडकमा आफ्नो गाडी राख्नु भन्दा जेट-स्काई चढाउन रुचाउँछन्। यसले उसको अनौंठो जीवनशैलीलाई समेट्छ।
Rees नेल्सन जीवन शैली तथ्यहरु। आईजी लाई क्रेडिट
Reiss नेल्सन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - अनियमित तथ्यहरू
उसका सबै भन्दा राम्रो साथीहरू: Asides Jadon Sancho, रेसका उनका दुई राम्रा साथीहरू छन् जो एडी र जो हुन्। सबै केटाहरू आर्सेनल एकेडेमीको श्रेणीमा गए जुन उनीहरूको व्यापारमा सफल भए।
रेस नेल्सनका राम्रा साथीहरू चिन्ने। एडी (बाँया) र जो (दायाँ)।
धर्म: नेलिसनको बीचको नाम रेस गर्नुहोस्लूका"उनी धर्मबाट ईसाई भएको र सम्भवतः क्याथोलिक विश्वासमा झुकाव भएको सुझाव दिन्छ।" 'लूकाप्रेरितहरूको कार्यका लेखक थिए र नयाँ नियममा यो तेस्रो सुसमाचारको पुस्तक हो।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो Reiss Nelson बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्या reading्क पढ्न को लागी धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाईंले केहि कुरा खोज्नुहुन्छ जुन सही देखिएन भने कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी सधै आफ्नो विचारहरुको मूल्य र आदर गर्नेछौं।